खोजीको लागि गुगल एड्सेन्स: वर्डप्रेसमा एम्बेड परिणामहरू | Martech Zone
खोजीको लागि गुगल एड्सेन्स: WordPress मा इम्बेड परिणाम
सोमबार, सेप्टेम्बर 4, 2006 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
जब म यस हप्तामा WordPress मा टेम्प्लेट कार्यको केहि थोरै गर्थें, मैले खोजी परिणाम पृष्ठमा खोजी परिणामहरूको लागि तपाईंको गुगल एड्सेन्स एम्बेड गर्ने बारेमा नोट देखें। यो धेरै सरल छ यदि तपाईंसँग स्थिर वेबसाइट छ, तर WordPress भित्र काम गर्दा यो अलि बढी गाह्रो हुन्छ। धन्यबाद, गुगलले राम्रो काम गरे (सामान्य जस्तो) परिणामहरू इम्बेड गर्न केहि राम्रो क्लिन स्क्रिप्टहरू लेख्दा।
मैले केवल मेरो "पृष्ठ" टेम्प्लेटलाई सम्पादन गरें र कोड प्रविष्ट गर्‍यो जुन गुगलले अवतरण पृष्ठको लागि आवश्यक छ। मसँग मेरो खोज पृष्ठमा खोज परिणामहरू पोस्ट गरिएको छ (https://martech.zone/search)। त्यसो भए, मैले मेरो खोजी पृष्ठलाई खोजी फारामको साथ अपडेट गरे (केहि साना सम्पादनहरू सहित)।
गुगलले आपूर्ति गरेको स्क्रिप्ट मात्र प्रदर्शित गर्न बौद्धिक छ यदि त्यहाँ कुनै पोष्ट परिणाम छ भने मेरो अन्य पृष्ठहरूले केहि पनि प्रदर्शन गर्दैनन्। मलाई लाग्छ कि मैले 'if स्टेटमेन्ट' लेख्न सक्थें जुन परिणाम मात्र प्रदर्शित हुन्छ यदि पृष्ठ खोजी पृष्ठसँग बराबर हुन्छ। जे होस्, मैले चिन्ता लिएन किनकि यसले अन्यथा प्रदर्शन गर्दैन। मलाई लाग्छ यो एक सानो ह्याक हो र उचित छैन, तर यसले केहि पनि चित्त दुखाउँदैन।
मेरो अर्को चरण यो सुनिश्चित गर्नु हो कि मेरो रोजगारदाता प्रति कुनै प्रतिस्पर्धी खोज परिणाम मा देखा पर्दैन! म आशा गर्छु कि मैले ती सबै पाएँ!
प्रयास गर यहाँ.
ट्वीक्स: फराइड फर्म्याटमा सर्दै
अखबारहरूले सोच्न आवश्यक छ ...